Jetpack: Maitiro Ekurekodha Uye Kuona Yakakwana Chengetedzo & Chiitiko Log kune Yako WordPress Saiti | Martech Zone
Kune akati wandei ekuchengetedza plugins anowanikwa kuti atarise yako WordPress muenzaniso. Mazhinji anotarisa pakuziva vashandisi vakapinda mukati uye vanogona kunge vakaita shanduko kune yako saiti iyo inogona kuunza njodzi yekuchengetedza kana kugadzirisa plugin kana dingindira rinogona kuityora. Kuva ne chiitiko cherogi inzira yakanaka yekutevera idzi nyaya uye shanduko pasi.
Nehurombo, pane chinhu chimwe chakafanana nevazhinji vechitatu-bato plugins kunze uko vanoita izvi, asi ... vanoshanda mukati meiyo WordPress saiti. Saka, kana iwe saiti ichidzika… unopinda sei murogi yezviitiko kuti uone zvaitika? Zvakanaka, haugone.
Jetpack muunganidzwa wezvimiro - zvese zvemahara uye zvakabhadharwa - izvo zvinogona kuwedzerwa kuburikidza neimwe plugin muWordPress. Musiyano mukuru weJetpack ndewekuti yakanyorwa, yakaburitswa, uye inotsigirwa nekambani imwechete inogadzira iyo yakakosha kodhi yeWordPress, Automattic. Mune mamwe mazwi, haugone kuwana yakavimbika uye inoenderana mupiro kupfuura izvozvo!
On Martech Zone, ndinonyorera kune ese ari maviri Jetpack Professional pamwe neyavo Site Search, iyo inopa yakatanhamara yekutsvaga mhinduro mukati pamwe nemamwe anotyisa mafirita sarudzo yekupfupisa kutsvaga kwako. Chikamu cheKunyoreswa Kwehunyanzvi chinosanganisira Jetpack Security, iyo inopa:
Automated WordPress backups ne-1-tinya kudzorera
WordPress malware kuongorora pamafaira epakati, madingindira, uye maplugins - kusanganisira kuziva kusagadzikana kunozivikanwa.
WordPress brute force attack protection kubva kuvarwisa vane utsinye
Downtime monitoring nezviziviso zveemail (pamwe nezviziviso kana saiti yako yadzoserwa)
komenda spam kudzivirira kune izvo zvisina musoro kutaura bots
Chengetedza chokwadi - Saina kuWordPress masaiti nekukurumidza uye zvakachengeteka, uye wedzera sarudzo mbiri-chinhu chechokwadi.
Chinhu chakavanzika mukati meJetpack's Chengetedzo maficha ndeayo Chiito Chiito, kunyange zvakadaro. Kuburikidza nekubatanidzwa neiyo yakakosha WordPress saiti, ini ndinokwanisa kuwana irogi yechiitiko chechero chiitiko chiri kuitika pane yangu saiti:
The Jetpack chiitiko chinyorwa ine kumwe kusefa kwakasiyana, kunondibvumira kuseta zuva rekuita uye kusefa nebasa remushandisi, post & peji chiitiko, shanduko yemedia, shanduko yeplugin, makomendi, backups & kudzoreredza, shanduko yewidget, shanduko yekuseta saiti, kutarisa pasi, uye dingindira. shanduko.
Chiito Chiito inonakidza kune WordPress administrator kuona yega saiti shanduko uye kutora fungidziro kunze kwekugadzirisa saiti kana mushandisi akaityora. Iwe uchaona chaizvo zvakaitika uye riini kuitira kuti utore matanho ekugadzirisa.
Jetpack zvakare ine yayo Mobile App yeIOS kana Android iyo iwe yaunogona kuwana nyore Chiitiko chako Log in futi. Yese yakaenzana zuva renji uye chiitiko mhando mafirita anowanikwa pane mbozha nhare zvakare.
Anopfuura mamirioni mashanu WordPress saiti anovimba neJetpack kune yavo webhusaiti kuchengetedza uye kuita. Jetpack yakanyorwa pane rondedzero yedu kufarira WordPress plugins.
Tanga neJetpack Security
Disclaimer: Ini ndiri affiliate for Jetpack, Jetpack Kutsvaga, uye Jetpack Security.
Tags: chiitiko cherogizvoga wordpress backupsotomatikiJetpackjetpack chiitiko logjetpack mobile appjetpack nyanzvijetpack kuchengetedzaWordPresswordpress chiitiko lgowordpress authenticationwordpress mabhakitiwordpress brute force attackwordpress comment spamwordpress comment spam protectionwordpress downtime chenjedzowordpress downtime monitorwordpress malware scanwordpress malware scannerwordpress malware scanningwordpress nhare mbozhaWordpress pluginwordpress plugin chiitikowordpress chengetedzo yechokwadiwordpress kuchengetedzekawordpress chengetedzo mobile appwordpress theme chiitikowordpress two-factor authentication